Uyikhetha njani imithwalo, iipakethe kunye neebhegi-Iindaba-ze-Phu Ly Bao Co. Ltd.
Ungayikhetha njani impahla, iipakethi kunye neengxowa
Ukuba nohlobo olufanelekileyo lwemithwalo, ukupakisha okanye ibhegi kuhambo lwakho kunokwenza ukupakisha kunye nokutsiba kwinqwelomoya okanye ukubetha indlela kube lula kwaye kungabi noxinzelelo. Kodwa ngeendlela ezininzi onokukhetha kuzo, ukuthatha isigqibo sokuba yeyiphi ekufaneleyo kunokuba ngumceli mngeni. Eli nqaku liphula iintlobo ezahlukeneyo zemithwalo kwaye linikezela ngengcebiso ekukhetheni ubungakanani obufanelekileyo, ubunzima kunye nenqanaba lokuqina. Ikwahamba ngaphezulu kweempawu ezinjengeevili, amagumbi eelaptop kunye nokuqhubeka kokuhambelana.
Iindidi zeMpahla, iiNgxowa kunye neePakethe
Zintathu iindidi ezibanzi zemithwalo: imithwalo enamavili, iipakethi zokuhamba kunye neetafile zokuhamba. Xa usenza isigqibo sokuba yeyiphi ekufaneleyo, kunokuba luncedo ukucinga malunga nezinto ezinjengendawo oya kuyo, indlela oya ngayo kunye nento oceba ukuyenza xa ufika.
Uncedo olucacileyo lwemithwalo, iipakethi kunye neebhegi ezinamavili yindlela ekulula ngayo ukuhambisa isikhululo seenqwelomoya kunye nezitalato ezigudileyo. Zintathu iindidi zemithwalo enamavili: umthwalo wokuqengqeleka, ii-duffel ezinamavili kunye noobhaka abanamavili.
Ukuhambisa umthwalo: Eyilelwe abahambi bemveli, ukuqengqeleka kwempahla yinto oyibona uninzi lwabantu lutsala ngasemva kwabo kwisikhululo seenqwelomoya. Ziza kuluhlu lobungakanani kwaye zihlala zibonisa ukwakhiwa okuqinileyo okwenzelwe ukusingatha ubunzima beenkqubo zothutho lwemithwalo. Zihlala zilungile kukhenketho lweshishini, utyelelo losapho, uhambo lwendlela kunye nokuya kwiindawo ezisezidolophini.
Iivili ezinamavili: Akukho nto iginya izixhobo njengebhegi ye-duffel, kwaye enye enamavili lukhetho olufanelekileyo kubahambi bezithuthi ezininzi. Ukuba iiholide zakho zihlala zifuna izixhobo ezinobungakanani obahlukeneyo kunye neemilo, i-duffel eqengqelekileyo yindlela efanelekileyo yokulungisa konke. Kwipakethi elula, i-duffel enamavili aqhubekekayo inikezela ngendawo encinci kodwa ikuvumela ukuba uyeke ixesha kunye nenkcitho yokujonga ibhegi. Ii-duffel ezinamavili lukhetho olufanelekileyo lokuhamba kukhenketho olufuna igiya enkulu okanye emile okweqanda, uhambo losapho kunye nohambo lwendlela. Ukuze ufunde okungakumbi malunga nokukhethwa kwe-duffel, funda malunga nee-duffels zokuhamba apha ngezantsi.
Oobhaka abanevili: Eyaziwayo ngabahambi be-adventure, ezi zidibanisa ukulungelelaniswa kwemithwalo enamavili kunye nokuhamba kobhaka. Ungahambisa izixhobo ezininzi ngokutsala okulula kwesiphatho esandisiweyo. Ukujongana nokuhamba ngenqwelomoya okanye ukuhamba ngezinyuko? Umtya emagxeni kunye nebhanti ye-hip yokuhambisa izinto ngaphandle kwezandla. Oobhaka abanamavili zezona zilungele ukuhamba ukhenketho kunye nohambo lwendlela. Ukuze ufunde okungakumbi malunga noobhaka, jonga icandelo leepakethi zokuhamba apha ngezantsi.
Olu luhlu luvela kwii-duffel ezisisiseko ozijula ​​egxalabeni ukuya kwii-duffels ezinamavili ezineziphatho ezandisiweyo (ukuze ufunde ngama-duffels anamavili, jonga icandelo leMithwalo enamavili kweli nqaku.) Olona ncedo luphambili lwee-duffel ngaphezulu kwezinye iindlela kuyilo olulula. Zilula ukuzisebenzisa kwaye ngokubanzi zibonisa indawo enye enkulu yokupakisha izixhobo zakho kunye nempahla. Ewe kunjalo, oku kunokuba yinto engalunganga xa ungumntu ocwangciswe ngokugqwesileyo ofuna iipokotho ezahlukileyo kunye namagumbi ukuze ahlale ethe tye. (Enye indlela yokuhlala ucwangcisiwe kwi-duffel kukupakisha izinto zakho kwiityhubhu zokuhamba okanye kwiingxowa zezinto.)
Iingxowa ze-Duffel ziyafumaneka ngobukhulu obahlukeneyo, ukusuka kwiingxowa eziphathwayo ezinemithamo engama-20 ukuya kwi-30 yeelitha kwaye ziya kubamba iimpahla ezifanelekileyo kwimpelaveki ukuya kwii-duffels ezinkulu ezibambe i-100 yeelitha okanye nangaphezulu kwiindawo eziza kufuna iitoni zegiye.
Iingxowa zesiko ze-duffel ezingenamavili zinokubonakala ngathi zezakudala zinikwe indlela ekulula ngayo ukwenza iivili zothutho. Kodwa, ukulungiselela iindawo ezikude ezinezitrato ezimaqhuqhuva, ezingagangathwanga, amavili aya kuba yingxaki ngakumbi kunokuba kufanelekile, kwaye baya kongeza iiponti ezininzi kubunzima bebhegi iphela. Ayisiyo kuphela into elula yesiko, zikwanokuthambeka ngakumbi kunamavili, zisenza ukuba kube lula ukuzifaka emqoloveni weemoto, ukulayisha kwiindawo zokubeka uphahla okanye umtya kwisilwanyana esipakishayo. Ezi duffels zikwalula ukuzigcina (akukho ziqina ziqinileyo, ngenxa yoko ziyagoba zincinci) kwaye zihlala zibiza kakhulu. Ziyindlela ekhethekileyo yokunyuka, ukuhamba kwabahambi kunye nabantu abhajethi abafuna ukukhupha izixhobo ezininzi.
Ezi bhegi zilungele ukuhamba zibalasele apho imithwalo enamavili ingakwaziyo: kwigrabile, kwizitrato ezinamatye anqabileyo, kwizinyuko nakwezinye iindawo ezingalinganiyo. Iipakethi zokuhamba zifana nezinye iibhegi ngokubhekisele kwindlela onxiba ngayo kunye nenkxaso abayinikezelayo, kodwa baneempawu ezithile zokuhamba, ezinje ngeepokotho zombutho, amabhande okufihla amabhande kunye nemixwayo yamagxa, kunye neempawu zokhuselo ezakhelwe-ngaphakathi, ezinje ngeeziphu ezitshixwayo. Zilungele abahambi abafuna ukuhamba kakhulu kwaye zilungile ngokuthwala yonke into emqolo.